Fampahalalana lehibe ara-toekarena, fampiharana ara-barotra Forex
Zava-dehibe ny mari-pamantarana ara-toekarena
Ny endriky ny toekarena dia ny antontan'isa fototra izay mampiseho ny fitantanana ny toekarena. Ny hetsika ara-toekarena manan-kery dia mampihetsi-po ny fihenam-bidy, noho izany dia zava-dehibe ny hahazoana famindram-bola avy amin'ny hetsika ara-toekarena eran-tany mba hanatanterahana ny fanadihadiana fototra, izay ahafahan'ny mpivarotra Forex mandray fanapahan-kevitra ara-barotra.
Ny fampandrenesana sy ny famakafakana ireo indikatiora dia manan-danja ho an'ny mpampiasa vola rehefa manondro ny fahasalamana ankapobeny amin'ny toekarena izy ireo, miandry ny fahamendrehany ary manome fahafahana ny mpampiasa hamaly ny fotoana hitrangan'ny hetsika tampoka na tsy azo hialana, fantatra ihany koa amin'ny fisavorovoroana ara-toekarena. Azo lazaina ho fitaovam-piadiana miafina ihany koa izy ireo rehefa manambara izay ho avy manaraka, izay mety ho andrasan'ny toe-karena sy ny fitantanana ny tsena.
VAROTRA VAROTRA VAROTRA (GDP)
Ny tatitra momba ny harena an-kibon'ny tany dia iray amin'ireo zava-dehibe amin'ny indostria ara-toekarena, satria io no fepetra goavana indrindra amin'ny toe-karena ankapobeny. Izany dia ny sandan'ny vola rehetra amin'ny entana rehetra sy ny serivisy novolavolain'ny toekarena manontolo nandritra ny fe-potoana voatsabo (tsy misy ny asa atao iraisam-pirenena). Ny famokarana ara-toekarena sy ny fitomboana - inona ny harin-karena faobe, dia misy fiantraikany goavana amin'ny ankamaroan'ny olona ao anatin'izany toe-karena. Ohatra, rehefa salama tsara ny toekarena, ny zavatra ho hitantsika amin'ny ankapobeny dia ny tsy fisian'ny asa ambany sy ny karama raisina satria ny orinasa dia mitaky asa mba hihaona amin'ny toekarena mitombo. Ny fiovana goavana amin'ny harin-karena faobe, dia misy fiantraikany lehibe eo amin'ny tsena, noho ny zava-misy fa ny fitomboana ratsy dia midika fa ambany noho ny orinasa, izay midika ho vola kely sy vidin'ny vidiny. Ny mpampiasa dia tena manahy ny fitomboan'ny harin-karena faobe, izay iray amin'ireo antony ampiasain'ny ekonomia mba hamaritana raha mitombo ny toekarena.
Ity tatitra ity no avo lenta fampiasam-bola be indrindra. Izy io dia mandrindra ny fiovana amin'ny vidin'ny entana sy entana entona isan-tsokajiny isam-bolana. Ny tsenan'ny tsenam-barotra amin'ny taom-pivarotana izay ahitana ny CPI dia avy amin'ny antsipirihany momba ny fandaniana avy amin'ny fianakaviana an'arivony manerana an'i Etazonia. Ny sobika dia tsy mihoatra ny 200 sokajy entana sy serivisy voatokana ho an'ny vondrona valo: sakafo sy zava-pisotro, trano , akanjo, fitaterana, fitsaboana ara-pahasalamana, fialam-boly, fanabeazana ary fifandraisana ary fitaovana hafa sy serivisy hafa. Ny fepetra goavana natao hanamboarana sary mazava momba ny fiovana amin'ny fandaniam-poana dia manampy ny mpiloka ara-bola hahazoana fiakaran'ny vidim-piainana, izay afaka manimba ny toekarena raha tsy voafehy izany. Ny hetsiky ny vidin'ny entana sy ny tolotra dia mivantana mivantana amin'ny fidiram-bola amin'ny faktiora (fampiasam-bola izay manome ny fiverenana amin'ny endrika ny fandoavam-potoana ara-potoana ary ny fiverenan'ny tale farany amin'ny fahamatorana). Ny fandaniana maotina sy maharitra dia andrasana amin'ny fitomboan'ny toekarena, saingy raha mitombo haingana ny vidin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana ny tsara sy ny serivisy, dia mety hahatsapa ny fihenan'ny tombony ny orinasa. Etsy ankilany, ny fanimbana dia mety ho marika ratsy manondro ny fihenan'ny mpanjifa mangataka.
Ny CPI dia mety ny endriny ara-toekarena manan-danja indrindra sy lehibe indrindra ary io no fepetra fantatra indrindra amin'ny famaritana ny vidin'ny fiovan'ny fiainana. Ampiasaina hanovana ny karama, ny fisotroan-dronono, ny fiantohana amin'ny hetra sy ny indostria ara-bola hafa. Izy io dia afaka milaza amin'ireo mpampiasa vola izay mety mitranga eo amin'ny tsena ara-bola, izay mizara ny fifandraisana mivantana sy mivantana amin'ny vidin'ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny CPI, ity tatitra ity dia heverina ho iray amin'ireo fepetra lehibe indrindra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Izy io dia mandrefy ny vidin'ny entana amin'ny ambaratonga ambony. Mifanohitra amin'ny CPI, ny PPI dia mamaritra ny hamaroan'ireo mpamokatra ho an'ny entana raha ny CPI dia mandany ny vidin'ny mpanjifa noho ny entana. Ny toetra lehibe indrindra eo imason'ireo mpampiasa vola dia ny fahaiza-manaon'ny PPI mba haminavina ny CPI. Ny teoria dia ny fiakaran'ny vidim-piainana izay iainan'ny mpivarotra dia alefa amin'ny mpanjifa. Ny sasany amin'ireo tanjon'ny PPI dia:
Ny mari-pahaizana marina momba ny CPI ho avy
Hitan 'ny tantara momba ny tantaram-piainana ela
Fifandimbiasana tsara avy amin'ireo mpampiasa vola any amin'ny orinasa voatsangana (miming, information information, sehatra sahanasa sasany
Afaka manetsika ny tsena tsena
Ny data dia aseho miaraka amin'ny tsy fanitsiana ny fizaran-taona
Amin'ny lafiny iray, ny fahalemena dia:
Ny singa mifono vy, toy ny angovo sy ny sakafo, dia afaka manetsiketsika ny angona
Tsy ny orinasam-panjakana rehetra no rakotra
Ny PPI dia manjary be dia be noho ny vidim-piainana manjavozavo ary azo raisina ho toy ny tsena goavam-be. Ilaina amin'ny fampiroboroboana ny mpampiasa vola amin'ny sehatra indostrialy amin'ny famakafakana ny fivoarana sy ny fivoaran'ny vola miditra.
Ity tatitra ity dia mamaritra ny entana novidina tao anatin'ny indostrian'ny indostrialy ary maka santionany amin'ny fivarotana varotra manerana ny firenena. Maneho ny angona avy amin'ny volana lasa izy io. Ny orinasan-kaonty rehetra dia ampiasaina amin'ny fanadihadiana, avy amin'ny Wal-Mart ho an'ny orinasa tsy miankina, tanàna kely. Satria ny fanadihadiana dia handrakotra ny fivarotana tamin'ny volana lasa teo, dia mampiseho izany fa tsy ny fampiroboroboana ity indostrialy manan-danja ity fa ny hetsika ara-barotra amin'ny ankapobeny. Ny fivarotana antsinjarany dia heverina ho toy ny fampitoviana mampiavaka (metric izay maneho ny toetry ny asa ara-toekarena ankehitriny ao anatin'ny faritra iray manokana) satria maneho ny toetry ny toekarena amin'izao fotoana izao izy io, ary heverina ho fampiharan-tetibidim-pitomboana mialoha koa, izay mahatonga ny tombontsoa lehibe indrindra Mpanara-maso ny Wall Street sy ny Biraon'ny famerenana ny fihaonambe izay mandrindra ny angon-drakitra ho an'ny talen'ny Federal Reserve Board. Ny famoahana ny tatitra Retail Sales dia mety hiteraka tsy fahampian-tsakafo eo amin'ny tsena.
Ny tsy fitoviany amin'ny maha-mpilaza ny tsindrim-pamoretana azy dia mety hitarika ny mpampiasa hamerina handinika ny mety hitrangan'ny fihenan-tsena Fed na ny fandaniana, arakaraka ny fitaratry ny fironana fototra. Ohatra, ny fiakaran'ny vidin'ny varotra antsokosoko eo afovoan'ny toeram-piasana dia mety hitranga amin'ny fiakarana fohy amin'ny vidin'ny zanabola ataon'ny Fed amin'ny fanantenana hamerana ny vidim-piainana mety hitranga. Raha mitombo na mihena ny fitomboan'ny varotra, dia midika izany fa tsy mandany ny haavon'ny tsenan'ny teo aloha ny mpividy ary mety hampiakatra ny tsimok'aretina noho ny anjara andraikitry ny tena manokana ny fampiasana ny fahasalaman'ny toekarena.
Ny fanambarana momba ny asa lehibe indrindra dia mitranga amin'ny zoma voalohany isam-bolana. Tafiditra ao anatin'izany ny tahan'ny tsy fananan'asa (isan-jaton'ny mpiasa tsy an'asa, ny isan'ny asa natsangana, ny ora mahazatra miasa isan-kerinandro ary ny salan'isa isam-bolana). Ity tatitra ity dia matetika miteraka fivoarana goavana. Ny tatitra momba ny NFP (Non-Farm Employment) dia angamba ny tatitra izay manana ny fahefana lehibe indrindra hampandrosoana ny tsena. Vokatr'izany dia maro ireo mpanao fanadihadiana, mpivarotra ary mpampiasa vola no miandry ny laharana NFP sy ny hetsika fitarihana hitranga. Miaraka amin'ny antoko maro mijery ity tatitra ity ary mandika azy io, na dia ny isa mifanaraka amin'ny tombanana dia mety miteraka haavo be izany.
Tahaka ny amin'ny famantarana hafa, ny fahasamihafana misy eo amin'ny tahiry NFP sy ny tarehimarika fantatra dia hamaritra ny vokatry ny angon-drakitra any an-tsena. Mivelatra any amin'ny toeram-pambolena tsy fambolena ny fambolena, mazava ho azy fa mitombo ny toekarena sy ny mifamadika amin'izany. Na izany aza, raha mitombo ny tahan'ny fihanaky ny NFP, dia mety mitombo ny vidim-piainana.
Araka ny asehon'ity anarana ity, ity mari-pamantarana ity dia mamaritra ny fahatokisan-tenan'ny mpanjifa. Izy io dia faritana ho toy ny dingan'ny fanantenana ahafahan'ny mpanjifa mifandray amin'ny toetry ny toekarena, izay maneho amin'ny alalan'ny mpividy mamonjy sy mandany asa. Ity fizahana ara-toekarena ity dia navoaka ny talata tamin'ny volana, ary mamaritra ny fahatsapan'ny olona ny fahatokisan'ny fidiram-bola amin'ny fidiram-bola izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fanapahan-keviny ara-toekarena, amin'ny teny hafa, ny asany. Noho izany antony izany, ny CCI dia hita ho endri-tsoratra manan-danja amin'ny endrika ara-toekarena.
Ny fandrefesana dia ampiasaina ho fanehoana ny lanjan'ny fitaovana enti-manavotra ary ny Federal Reserve dia mijery ny CCI rehefa mamaritra ny fiovan'ny toetrandro.
Ity tatitra ity dia manamarina ny habetsahan'ny olona mandany ny fividianana lava (vokatra izay andrasana mihoatra ny 3 taona) ary mety hanome fanazavana mikasika ny hoavin'ny orinasa famokarana. Ilaina ho an'ny mpampiasa vola fa tsy amin'ny fepetra voalazan'ny baiko fotsiny, fa ho mariky ny fangatahana ara-barotra amin'ny ankapobeny. Ny tsenan-danjam-bola dia maneho ny fanatsarana ny vola avo lenta izay ahafahan'ny orinasa iray atao sy manamarina ny fahatokisany amin'ny raharaham-barotra, izay mety hitarika amin'ny fampitomboana ny varotra hanamafisana ny varotra fanampiana sy ny vola miditra amin'ny ora fiasàna ary ny karama tsy misy fambolena. Ny sasany amin'ireo tanjon'ny fananana entana ilaina dia ny:
Miala amin'ny asany tsara
Ny data dia nomena mena sy fanitsiana
Manolotra angon-drakitra mialoha, toy ny tahan'ny entana sy ny orinasa vaovao, izay manisa ny vola miditra amin'ny ho avy
Etsy andaniny, ny fahalemena izay mety ho fantatra dia:
Ny santionan'ny fanadihadiana dia tsy mitondra ny fitsipiky ny fari-pahaizana statistika handrefesana fahadisoana
Tena tsy misy dikany; Tokony hampiasaina ny averin'ny mpandeha mba hamantarana ireo fironana maharitra
Ny tatitra amin'ny ankapobeny dia manome fahatakarana bebe kokoa momba ny sehatry ny famatsiana izay mampiseho ny ankamaroan'ny fampahalalana, ary mety ho tena ilaina amin'ny fanampiana ny mpampiasa hahatsapa ny mety hahazoana vola miditra amin'ny orinasa tena solo tena.
Ny daty famotsorana ity mari-pamantarana ity dia Alarobia mialohan'ny fivoahan'ny Komity Federaly Open Market (FOMC) amin'ny salam-pandaharana, valo (8) isan-taona. Ny teny hoe 'Beige Book' dia ampiasaina ho an'ny tatitra momba ny Fed antsoina hoe Famintinana ny fanamarihana momba ny fepetra ara-toekarena misy ankehitriny avy amin'ny Distrika Federal Reserve.
Ny Bokin'i Beige amin'ny ankapobeny dia ny tatitra avy amin'ny banky ary ny dinidinika amin'ny mpahay toekarena, ny manam-pahaizana momba ny varotra, sns. Ary ampiasaina hampahafantarana ny mambra momba ny fiovana eo amin'ny toekarena izay mety nitranga nanomboka ny fivoriana farany. Ny adihevitra matetika dia manodidina ny tsenan'ny asa, ny karama sy ny vidin'ny asa, ny varotra ary ny fivarotana ecommerce ary ny famokarana vokatra. Ny maha-zava-dehibe ny boky beige dia mitondra any amin'ny mpampiasa vola dia afaka mahita ny fanehoan-kevitra izay mandroso sy manampy amin'ny faminaniany ny fironana sy miandry ny fanovana mandritra ny volana vitsy manaraka.
Ny tahan'ny zanabola no mpamily lehibe indrindra amin'ny tsenam-bola ary ny endri-pifanakalozana ara-toekarena voalaza etsy ambony dia hijerena akaiky ny Komity Federaly Open Market mba hamaritana ny fahasalaman'ny ankamaroan'ny toekarena. Ny Fed dia afaka manapa-kevitra mifanaraka amin'izany raha toa ka hampidina azy, hivoatra na handao ny tahan'ny zanabola tsy miova, ka miankina amin'ny porofo voangona amin'ny fahasalaman'ny toekarena. Ny fisian'ny zanabola dia ahafahan'ny mpisambotra mandany vola avy hatrany fa tsy miandry ny hamonjy ilay vola mba hividianana. Ny ambany kokoa ny tahan'ny zanabola, ny olona vonona kokoa hividy vola mba hividianana be, toy ny trano na fiarakodia. Rehefa mandoa vola amin'ny mpanjifa ny mpanjifa, dia manome vola bebe kokoa ho azy ireo izy ireo izay afaka mamorona vokatra mampitombo ny fandaniana eo amin'ny lafiny ekonomia. Etsy ankilany, ny tahan'ny zanabola avo lenta dia midika fa tsy manana fidiram-bola azo antoka ny mpanjifa ary tsy maintsy manapaka ny fandaniana. Raha toa ka mitombo avo lenta ny tahan'ny zanabola, ny banky dia mihabetsaka kokoa. Izany dia mitarika ny mpanjifa, ny orinasa ary ny tantsaha izay hanapaka ny fandaniana amin'ny fitaovana vaovao, ka hampihena ny vokatra na hampihenana ny isan'ny mpiasa. Isaky ny miakatra ny sandan'ny zana-trosa na mandona, dia mandre ny tahan'ny tahan'ny federaly (ireo banky tahan'ny mampiasa vola mba hampindram-bola ny tsirairay). Ny fiovan'ny tahan'ny zanabola dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny vidim-piainana sy ny fitakiana ara-toe-karena Ny inflation dia manondro ny fiakaran'ny vidin'ny entana sy ny serivisy amin'ny fotoana, vokatry ny toekarena matanjaka sy salama. Na izany aza, raha tsy voavaha ny fiakaran'ny vidim-piainana, dia mety hiteraka fahavoazana lehibe amin'ny fividianana angovo izany. Araka ny hita, ny fidiram-bola dia misy fiantraikany amin'ny toekarena amin'ny fiantraikan'ny mpanjifa sy ny fandaniam-bola, ny fandaniana ary ny famerenana. Amin'ny fanitsiana ny tahan'ny federaly, ny Fed dia manampy amin'ny fitazonana ny toekarena mandanjalanja mandritra ny fotoana maharitra.
Ny fahatakarana ny fifandraisana eo amin'ny tahan'ny zanabola sy ny toekarena amerikana, dia manampy ny mpampiasa hahatakatra ny sary lehibe ary handraisany fanapahan-kevitra tsara kokoa.
Ny tatitra dia ahitana ny isan'ny trano vaovao izay nanomboka nanangana ny volana ary koa ny fivarotana an-trano efa misy. Ny asa momba ny fonenana dia antony lehibe amin'ny fanentanana ara-toekarena ho an'ny firenena iray ary fepetra ara-toekarena tsara. Ny fivarotana trano an-tsokosoka ambany sy trano fonenana vaovao dia azo raisina ho mariky ny toekarena kely. Ny fahazoan-dàlana sy ny trano fametrahana trano dia aseho ho fiovan'ny isan-jato avy amin'ny volana sy ny taona. Ny trano fonenana dia manomboka ary ny toeran'ny fanamboarana dia heverina ho toy ny fitarafana indostrialy, ary ny fametrahana ny fahazoan-dàlana hametrahana ny vola dia ampiasaina hanondroana ny Biraon'ny Indostrian'ny Fihaonambe ao amin'ny Konferansa (singa iray ampiasaina isam-bolana mba haminavinana ny fitantanana ny hetsika ara-toekarena maneran-tany amin'ny volana manaraka) Ity dia tsy tatitra iray izay manakorontana ny tsena, na izany aza, ny mpampiasa sasany dia hampiasa ny trano fonenana manomboka manoratra mba hanampy amin'ny famoronana tombanana ho an'ireo mpampiasa hafa mifototra amin'ny mpanjifa.
Ity tatitra momba ny statistika ity dia noforonin'ny Bureau of Economic Analysis (BEA) isan-kerinandro ary mamintina ny fidiram-bola amin'ny orinasa ao amin'ny National Income and Product Accounts (NIPA).
Ny maha-zava-dehibe azy ireo dia mifandraika amin'ny harin-karena faobe, satria tombotsoa ara-barotra matanjaka no maneho ny fivoaran'ny varotra ary mampiroborobo ny fitomboan'ny asa. Ny orinasa dia mampiasa ny tombontsoan'izy ireo mba hampanan-karama, handoavana ny hetra amin'ny tompon'ny orinasa na hampiasa vola amin'ny orinasa. Ankoatra izany, mitady tombontsoa amin'ny fampiasam-bola ny orinasa, noho izany dia mampitombo ny tsena amin'ny varotra.
Ny fifandanjan'ny varotra dia ny fahasamihafana eo amin'ny importation sy ny fanondranana firenena nomena mandritra ny fotoana voafetra. Mampiasa ny toekarena ho toy ny fitaovana statistika izy io, satria manome fahafahana azy ireo hahatakatra ny tanjaky ny toekaren'ny firenena raha oharina amin'ny toeran'ny firenena hafa sy ny fivarotana varotra eo amin'ny firenena.
Tombontsoa azo tsinontsinoavina, izay misy tombany azo antoka dia midika fa mavesatra kokoa ny fanondranana entana; Amin'ny lafiny iray kosa, ny tsy fahampian'ny varotra dia mety hitarika any amin'ny trosa manan-danja.
Navoaka isam-bolana ilay index.
Ity famakafakana statistika ity dia mari-pamantarana ara-toekarena momba ny fahasalamana ankapobeny amin'ny toekarena, izay tapa-kevitra amin'ny hevitry ny mpanjifa. Izy io dia ahitana fahatsapana ny fahasalamam-bola ara-bola misy ankehitriny, ny fahasalaman'ny toekarena ao amin'ny kaominina amin'ny fotoana fohy ary ny faminaniana momba ny fitomboan'ny toekarena maharitra.
Ny fihetseham-pon'ny mpanjifa dia azo ampiasaina mba hahitana ny maha-olona manintona na manjavozavo manoloana ny toe-piainana ankehitriny.
Ny PM Manufacturing dia endriky ny fahasalamana ara-toekarena amin'ny sehatry ny famokarana any amin'ny firenena iray. Ny endriny dia mifototra amin'ny fanadihadiana ny mpitantana varotra avy amin'ny orinasa lehibe manerana ny sehatry ny famokarana, mandrefy ny hevitr'izy ireo momba ny toe-karena ankehitriny sy ny hoavin'ny ho avy.
Ny Index dia navoakan'i Markit sy ISM, izay heverina ho manan-danja kokoa ny fanadihadiana ISM.
Ny fitomboan'ny fananana dia mitarika ho amin'ny fanamafisana ny vola ary ny marika famantarana 50 dia heverina ho toy ny sehatra manan-danja, ambonin'izany ny fihenan'ny fandraharaham-barotra momba ny orinasa ary mihena ny ambany.
Ny index Manufacturing PMI dia avoaka isam-bolana.
Manokatra kaonty ECN FREE Today!
COUNTRY Afghanistan Albania Alzeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua sy Barbuda Arzantina Armenia ao Aruba Aostralia Aotrisy Azerbaijan Bahamasy Bahrain Bangladesy Barbados Belarosia Belize Benin Bermudes Bhutan Bolivia, Plurinational State ny Bosnia sy Herzegovina Botsoana Brezila British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bolgaria Borkina Faso Burundi Kambodza Kamerona Kanada Cape Verde Cayman Islands Repoblikan'i Afrika Afovoany Tchad Shily Shina Cocos (Keeling) Nosy Kolombia Comores Congo Congo, ny Repoblika Demokratikan'i ny Nosy Cook Costa Rica Cote d'Ivoire C te d'Ivoire Kroasia Kiobà Sipra Repoblika Tcheky Danemark Djibouti Dominica Repoblika Dominikanina Ekoatera Ejipta El Salvador Ginea Ginea Eritrea Estonia Ethiopia Nosy Falkland (Malvinas) Faroe Islands Fidji Failandy Frantsa Guyane Pôlinezia frantsay French Southern Territories Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Gresy Groenlandy Grenady Goadelopy Guam Guatemala Guernsey Ginea Guinée-Bissau Goiana Haiti Jereo Masina (Vatican City State) Honduras Hong Kong Hongria Islandy India Indonezia Iran, Repoblika Islamika ny Irak Irlandy Isle of Man Isiraely Italia Jamaika Japana Jersey Jordania Kazakhstana Kenya Kiribati Korea, Repoblika Demokratika ny olona ny Korea, Republic of Koety Kyrgyzstan Lao ny Repoblika Demokratikan'i People Letonia Libanona Lesotho Liberia Libyan Arab Jamahiriya Liechtenstein Litoania Luxembourg Macao Makedonia, teo aloha Repoblika Yugoslav Madagasikara Malawi Malezia Maldives Mali Malta Nosy Marshall Martinique Maoritania Maorisy Mayotte Meksika Mikronezia, Federated States of Moldavia, Republic of Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Maraoka Mozambika Myanmar Namibia Nauru Nepal Pays-Bas Netherlands Antilles New Caledonia Novely zelandy Nicaragua Niger Nizeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Norvezy Oman Pakistan Palau Palestiniana Territory, Occupied Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Però Filipina Pitcairn Polonina Portiogaly Puerto Rico Qatar Reunion R union Romania Federasiona Rosiana Rwanda Saint Barthlema Saint Helena, Ascension sy Tristan da Cunha Saint Kitts sy Nevis Saint Lucia Saint Martin (French anjara) Saint Pierre sy Miquelon Saint Vincent sy ny Grenadines Samoa San Marino Sao Tome sy Principe Arabia Saodita Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Nosy Salomon Somalia Afrika Atsimo South Georgia sy ny Nosy Sandwich Atsimo Espaina Sri Lanka Sodàna Suriname Svalbard sy Jan Mayen Soazilandy Soeda Soisa Repoblika Arabo Syriana Taiwan, Province Shina Tajikistan Tanzania, United Republic of Thailand Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad sy Tobago Tonizia vorontsiloza Turkmenistan Nosy Turks sy Caicos Tuvalu Oganda Ukraine Emirà Arabo Mitambatra fanjakana mitambatra Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezoela, Bolivariana Republic of Viet Nam Virgin Islands, Britanika Virgin Islands, US Wallis sy Futuna Western Sahara Yemen Zambia Zimbaboe